Home » Featured » Mahazo ny fenitra fiarovana vaovao COVID-19 ho an'ny seza ny talen'ny mpamaky
Mahazo ny fenitra fiarovana vaovao COVID-19 ho an'ny seza ny talen'ny mpamaky
Tao anatin'ny roa volana monja, niova ny maro, ary raha jerena ny valan'aretina COVID-19 ankehitriny, ny seza talen'ny talen'ny asa ho an'ny indostrian'ny famokarana, Filmcraft Studio Gear, namoaka tolo-kevitra momba ny fiarovana seza seza fampiasana sy fanoroana ny torolàlana amin'ny setra azo antoka. Ny fanoloana ny sezan'ny talen'ny talen'ny birao misy plastika dia tsy omena torohevitra, ary izany dia satria voaporofon'ny plastika ho safidy mahasosotra ho an'ny tontolo iainantsika amin'ny lafiny biodegradability. Mampitombo ny loza mety hitranga amin'ny virus io. Ny fandinihana natao vao haingana dia nahitana ny antsipiriany fa ny maharitra maharitra COVID-19 no lava indrindra rehefa eo amin'ny plastika na vy vy. Ny kitay dia iray amin'ireo fitaovana tena ilaina amin'ny fahadiovana rehefa manamaivana ny fahaleovantenan'ny COVID-19, izay hita fa milamina hatramin'ny 7 andro eo amin'ny takelaka plastika ny tsimokaretina fa tsy voavaha tanteraka ilay otrik'aretina aorian'ny 2 andro eo amin'ny kitay. Satria ny fananana hazo dia manana toetra antimicrobial voajanahary, voaporofo fa mahasoa izany raha oharina amin'ny fandalinana siantifika hoe ahoana ny fomba COVID-19 dia afaka miaina honina lava indrindra amin'ny takelaka plastika, fitaratra ary vy-vy tsy maharitra ela mandritra ny fito andro.
Sasao amin'ny rano mafana sy maina ny rivotra. Most seza seza canvases dia vita amin'ny landihazo ary mora ny manasa. Na izany aza, tsy tokony hamporisika ny fanamaina azy ireo ao anaty milina izy ireo satria mety mampihena ny fahatelon'ny plastika ao amin'ny seza misy ny seza. Ny fampidinana rivotra dia soso-kevitra
Mampiasà steamer mba ahosotra hanadio ny tany tsy azo antoka ary tsy mampiasa simika henjana. Fitaovana mpanao akanjo, izay matetika hita eo amin'ny seho horonantsary sy orinasa manofa trano, dia fomba tsara handefasana haingana ny bakteria na otrikaretina, Ny setroka dia mahatratra ny mari-pana amin'ny 212F izay ampy hamingana ny otrikaretina mifanerasera aminy. Ity no fomba tsara indrindra sy tsotra indrindra azo averina matetika
Ny kalitaon'ny seza sy talen'ny talen'ny mpitsara sy ireo toetra ireo dia natao ho toy ny haingon-trano lehibe teo amin'ny seho studio tao anatin'ny 75 taona. Ny hazom-boankazo vita amin'ny seza dia azo kosehina mora foana miaraka amin'ny Lysol sy / na loto hafa disinfectant. The lamba mety ho voapoizina azo tsapain-tanana tsy misy fahavoazana ny setroka, ary ny antony mahatonga izany dia noho ny halavany amin'ny fitaovana matanjaka izay tsy ampy ho an'ny mpiasan'ny plastika.
biodegradability lamba Covidien-19 seza seza seza seza Filmcraft Filmcraft Studio Gear Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Joe Iacobellis Litra lysol Matthews areti-mifindra fepetra fepetra fiarovana Spears & Arrows Ultra HD Forum 2020-05-11
Previous: Lahateny amin'ny Tech: An NAB Show Edition LIVE manokana - LIVE 13-14, 2020